BBC Somali - Warar - Turkiga oo ciidammadiisa dhaqaajiyay
Turkiga oo ciidammadiisa dhaqaajiyay
Markii u dambaysay ee la cusboonaysiiyay: 28 June, 2012, 10:48 GMT 13:48 SGA
Dowladda Turkigu waxay xoojisay ciidanka ka jooga soohdinta ay la leedahay turkiga.
Kolonyo baabuur militeri ah, oo ay ku jiraan taangiyo, qoryaha lidka dayaaradaha iyo baabuurta ay gantaalladu ka dhacaan, ayaa la arkay ayaga oo u sii socda dhinaca magaalada Yayladagi ee ku taal soohdinta labada dal ee koonfurta dalka Turkiga.
Baabuur qafilan ayaa iyagana loo daad gureeyay qeybaha kale ee soohdinta.
Tallaabadani waxay ku soo beegantay iyada oo in ka yar toddobaad laga joogo markii ay Suuriya soo ridday dayaarad militeri oo Turkigu leeyahay.
Turkigu wuxuu sheegay in dayaaradaha Suuriya ay ku xad gudbeen hawada Turkiga in ka badan 100 jeer sannadkaan gudhiisa.